Waxa ay Sumaysay 15 ka mid ah Dumaashiyadeed si ay uga Baxsato Guur Lagu Khasbay | Maankaab.com
Haweenay u dhalatay dalka Bakistan oo lagu amray in ay guursato nin aanay rabin, ayaa ku kacday fal aad u naxdin badan, kadib markii ay sumaysay 15 nin oo la dhashay ninka loo guuriyey si ay uga baxsato guurka qasabka ah.
Aasiya Bibi oo u dhalatay magaalada Mzuaffargarh oo ku taal Gobolka Koonfur Galbeed ee Punjab, ayaa qasab lagaga dhigay in ay guursato Amjad Akram bishii September ee sannadkan.
Muddo laba bilood ah markii ay ku jirtay guurka aanay ku faraxsanayn, ayaa haweenaydan 21 jirka ah ooh ore u jeclayd nin kale qorshaysay in ay disho ninka lagu qasbay oo 25 jir ah. Waxa ay go’aan ku gaadhay in ay sun ugu darto caano ay siin jirtay.
Amjad ma uu cabin caanihi sumaysnaa ee loogu talagalay, balse hooyadii ayaa inta ay qaaday caanihii ka samaysay ciir la yidhaa Lassi oo ay caan ku yihiin, dhaqan ahaana ay cabaan bulshada Hindiya iyo Bakistan degta.
Waxa caanihii cabay 27 xubnood oo ka mid ah qoyska Amjad, iyagoo dhammaantood ku xannuunsaday afkana xumbo ka keenay sida lagu yaqaan suntan. Waxa halkii ku dhintay 15 ka mid ah qoyskaas, sababtoo ah waxa halis badnaa suntaas, iyadoo 12 qof oo kale ilaa hadda xaaladoodu halis tahay oo cusbitaalka yalaan.
“Aasiya waxa lagu qasbay Amjad oo aanay ogolayn. Qof faraxsan ma ay ahayn, waxa ay ku soo noqotay guriga waalidkeed kadib dhawr maalmood uun ay ka soo wareegtay guurkaas, balse qoyskeedu waxay qasab kaga dhigeen in ay soo raacdo qoyska ay la xididka ahayd oo soo doonay. Kadib waxa ay qorshaysay in ay guurkan soo afjarto, iyadoo sun ka soo qaadatay nin ay is-jeclayeen ee Shahid Lashari la yidhaa, balse qorshihii wuu khaldamay, waxaana caanihii cabay cid aanay ugu talagalin oo ah xubnaha qoyska oo ciir ahaan looga sameeyey,” ayuu yidhi sarkaal sare oo arrintan baadhisteena loo xilsaaray.
Baadhitaankii hore Aasiya waxa ay sheegtay in caanaha uu ku dhacay mulac, sidaasna ay ku sumoobeen, balse aakhirkii waxa ay qiratay in arrintay ay ka dambaysay, gaar ahaan doorkeeda iyo sida ay u wada qorsheeyeen ninka ay hore u jeclayd.
Waxa kiiskan loo soo xidhay saddex qof oo kala ah Aasiya, ninkay is jeclaayeen iyo eedadeed oo looga shakiyey in ay door ku lahayd qorshaha lagu sumeeyey dadkan. Inkastoo ninka Aasiya ay is jeclaayeen diiday eeda loo soo jediyey waqti warbaahintu warraysanaysay, balse ilaa hadda baadhitaanka kiiskan waa lagu guda jiraa.
Inkastoo dalka Bakistan dhawaan laga hirgeliyey sharci lagaga hortagaayo in carruurta la guuriyo amma qof lagu qasbo qof aannu rabin, haddana waxa jira cawl celin aan ku filnayn oo ay helaan haweenka diida lammaanaha ay qoyskoodu u dooraan.